Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana blogueur en herbe, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti ese akafanana ndechekushandisa kwemavara ezvinyorwa. Kuisa imwe pfungwa pane yako yakaratidzirwa mavara (kana typographic dhizaini) hazvina kusimbisa zvinoshamisa kuti kugadzira yako saiti inogadzirisa uye kuve nechokwadi chekubudirira kwayo.
Hechino chinhu, iwe unogona kunge uine chinotyisa modèle WordPress kana kuisa zvinonakidza mifananidzo pawebsite yako ZVINOKOSHA kana iwe uchishandisa police de base peu attrayante (kana zvakanyanya Comic Sans!), Ipapo iwe uchazopedzisza inatsvaszakas Inva.
Uyezve, iwe unoshaya pane huwandu hwekunakisa kwewebhu typographie iyo inowanikwa en ligne.
Zvechokwadi, kana iwe uchida kuve nechokwadi chokuti iyo mhando yaunosarudza mitoro yakavimbika pane mamwe makombiyuta, unofanira kusarudza "webhuti yakachengeteka".
Ne 25 yedu yakaisvonaka yewebhu yakachengeteka mafonti, iwe uchava nechokwadi chokuti unoshamisa typographie web yewebsite yako iyo inoshanda nguva yose, pakuguma kwechikamu ichi!
1 Chii chinonzi Web Safe Coffre?
1.1 Nei webhutete yakachengetedzwa fontes nyaya?
2 I25 Gorgeous Web Safe Fonts KwaSite Web Yako
2.6 11. Courrier Itsva
Chii chinonzi Web Safe Coffre?
Nei webhutete yakachengetedzwa fontes nyaya?
Mune zvimwe kuti urege izvozvo, concepteurs de sites Web vave vachishandisa iyo Nhamba Dzakawanda dzeWebhu kuti Microsoft yakabudiswa muC1996 seyero yemahofisi akawanda webusaiti. Izvi zvakagadzirwa zvemashoko pakupedzisira yakava "webhutete yakachengetedzwa", nokuti pasinei nekombiyuta, mafonti achaonekwa zvakanaka pawebsite yako.
Pane nzira dzakawanda dzaungashandisa kuwedzera mafaira aya mujiji rako rewebhu, asi kana iwe usati uri mukuronga kana unenge usiri-kwete-unyanzvi hwehutano, iwe unogona kungonyora kopi yeCup yakepak yakepanak.
Fichier takura musoro wako weheta.php
Source de police Kopa / code standard
Takura yako style.css, isa podhesi yepafaira kuti uchinje font text yeunosarudza.
Pakuguma kwayo, iwe unofanirwa kuva feuille de style ne inoratidzika seiyi:
I25 Gorgeous Web Safe Fonts KwaSite Web Yako
Liens / Mhuka: Fonts.com / Pile de polices CSS
11. Courrier Itsva
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce blogger pemula budiman, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana budding blogger، chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe e-mailben a muridzi wechitoro e-kereskedelem csatorna kezdő blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iuri uri muridzi wechitoro eCommerce kana budding blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce קאנא בלוגר ניצני, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti